Warbixinta Isbeddellada Musqusha ee Mareykanka ee 2020: Musqulaha Smart, Musqulaha Dareemayaasha, iyo Kabadhada Musqusha ee Caadiga ah ayaa caan ku noqon doona!
Bogga ugu weyn / blog / Warbixinta Isbeddellada Musqusha ee Mareykanka ee 2020: Musqulaha Smart, Musqulaha Dareemayaasha, iyo Kabadhada Musqusha ee Caadiga ah ayaa caan ku noqon doona!
2020 / 11 / 02 Qoondayntablog 1806 0
Jikada Iyo Bath. Jikada Iyo Bath Headlines.
HOUZZ, oo ah mareeg internet oo ka shaqeysa adeegyada guryaha, ayaa soo saarta daraasad sanadle ah oo ku saabsan isbeddellada musqusha ee Mareykanka, iyo daabacaadda 2020 ee warbixinta ayaa ugu dambeyntii la soo saaray. Sannadkan, HOUZZ waxay daraasad ku sameysay 1,594 milkiileyaal Mareykan ah oo cusbooneysiiyay musqulaha sanadkii la soo dhaafay oo ku saabsan alaabada ay doorteen iyo isbeddelada ay sameeyeen markii ay sidaas sameeyeen. Natiijooyinka waxaa lagu soo koobi karaa sida soo socota: Nasasho iyo Madadaalo, Teknolojiyad Sare, Astaamaha Iftiinka, Lahjadda Lahjadda, Isku Dhafka Casriga ah, iyo inbadan.
- Alaabada Musqusha -
Badeecada oo loo badalo Qubeyska
Tiro sii kordheysa oo milkiileyaal Mareykan ah ayaa u arka musqusha inay tahay meel lagu nasto, iyadoo 41% ka mid ah 1,594 milkiileyaasha guryaha la wareystay ay sheegeen inay ku nastaan ​​oo ay ku nastaan ​​musqusha. Siyaabaha ugu waaweyn ee lagu nasto waa qooyo iyo maydhasho, iyadoo boqolkiiba 55 jawaabeyaashu ay sheegeen in qoynta musqusha ay ka caawinayso inay nastaan.
In kasta oo shaqada nasashada ee barkadaha qubeyska la aqoonsan yahay, in ka badan boqolkiiba 50 jawaabeyaasha dayactiray musqulahooda sannadkan weli ma aysan isticmaalin barkadaha qubeyska, 23 boqolkiiba xitaa waxay yiraahdeen waan ka saarnay. Iyo jawaabayaasha doortay inay ka saaraan barkadooda, afar meelood shan meelood waxay doorteen inay u badalaan qubeys badalkeeda, iyadoo boqolkiiba 54 ay ka warbixinayaan kordhinta cabirka madaxooda, ilaa laga badalo qaabka musqusha (45 boqolkiiba) iyo kordhinta cabirka musqusha. (20 boqolkiiba).
▌Dad badan ayaa doorbidaya Kabadhada Musqusha ee Customka
Kuwa doortey inay badalaan qolkooda musqusha, 36% waxay doorteen khaanadaha musqusha ee caadiga ah iyo 21% kale waxay doorteen khaanadaha musqulaha semi-caadada ah, taas oo ka turjumeysa xaqiiqda ah in armaajooyinka musqusha ee caadada ahi ay sidoo kale bilaabeen inay dhex galaan suuqa Mareykanka, halka 28% ay doorteen armaajooyinka musqusha meel badan oo keyd ah. Marka la eego qaabka golaha musqusha, 56% jawaabeyaasha ayaa doorbiday armaajooyinka musqusha oo la dhisay, oo ay ku xigto xaraash (28%) iyo darbi-jiingad (15%), iyadoo tirada jawaabeyaasha ay doorteen alaabooyinka darbiga ku dheggan oo kordhaya 4 boqolkiiba dhibco.
Musqulaha Smart-ka Ayaa Ka Caan Ahaa.
Sannadkan, boqolkiiba 17 milkiilayaasha guryaha ee Mareykanka ee doortay inay u beddelaan musqusha oo ay wataan aalad, waxay kor u kaceysaa boqolkiiba 5 boqolkiiba sanadkii la soo dhaafay; 14 boqolkiiba iyo 13 boqolkiiba jawaabeyaasha, siday u kala horreeyaan, waxay doorteen musqulo leh astaamo is-nadiifin ah iyo kuraas kululaan, oo sidoo kale lagu qalabeeyay musqulo xariif ah. Intaa waxaa dheer, ka hortag-furin, iftiin habeenkii la dhisay, fliil si otomaatig ah u socda, is beddel otomaatik ah iyo astaamo kale ayaa sidoo kale soo jiitay dareenka.
Dem Basiiska Basiinku Waa Mid waafaqsan Sannadkii Hore
Caan ka ahaanta astaamaha kala duwan ee dooxada ayaa asal ahaan aan isbadalin sanadkii hore, iyadoo tirada ugu badan ee milkiilayaasha guryaha ee Mareykanka ay doorteen inay ku badalaan dooxadooda hoostooda (65%), waxaa ku xigay recessed (17%) iyo countertop (9%) . Intaa waxaa sii dheer, 68% waxay kaloo doorteen inay isticmaalaan weelka laba-geesoodka ah, kaasoo qiyaastii la mid ah boqolkiiba labadii sano ee la soo dhaafay.
Badbaadinta Biyaha, Qalabka Tamarta Dareemayaasha Ayaa Walaac Weyn Leh
Sideetan iyo toddobo boqolkiiba dhammaan jawaab bixiyayaashu waxay badaleen qasabadihii. Kuwa badalay qasabadooda, boqolkiiba 48 milkiilayaasha guryaha waxay leeyihiin ugu yaraan hal qasabad oo cusub oo leh aalad tiknoolajiyad sare leh. 28% ka mid ah, tubooyinka cusub ee jawaab-bixiyeyaashu waxay leeyihiin astaamo lagu keydin karo biyaha, 4 boqolkiiba ayaa ka yar sanadkii la soo dhaafay; 16% milkiilayaasha qasabadaha cusub farta kuma dhegaan; 5% qasabadaha cusub ayaa noqon kara kuwo taabasho la'aan ah, tiradani waxay ku kordhay 2 boqolkiiba dhibcihii sanadkii hore, taasoo muujineysa in qasabadaha dareemayaasha ay si aad ah caan u yihiin.
LLaydhka Nalalka, Uguur Galaha Muraayadda Musqusha Features
Muraayadaha, 20 boqolkiiba waxay doorteen badeecooyin leh nalalka LED-ka, lix boqolkiiba dhibco ka sarreeya sanadkii la soo dhaafay, sidoo kale waxaa jiray xoogaa dalab ah defogging, iyadoo 14 boqolkiiba ay doorteen alaabooyin leh astaantan.
- Booska Musqusha -
▌Tiilku Weli Waa Muhiimka Aagga Qubeyska
Qiyaasta dib u habeynta darbiyada qubeyska iyo dabaqyada, tirada ugu badan ee dadka waxay doorteen alaabada lebbiska, iyadoo 70% ay doorteen lebenka darbiyada, kororka 4 boqolkiiba dhibcaha sanadkiiba. Gidaarada iyo sagxadda labadaba, in kabadan 10% dadku waxay doortaan marmar, laakiin xulashada marmarka dabaqa ayaa hoos udhacay boqolkiiba 5, taasoo ka tarjumeysa tirada sii kordheysa ee dadka inay tixgeliyaan arrimaha amniga musqusha.
Are Aagaggii Qubayska Aanu Ka Bixin Oo Bilaabay Dhismayaal Caan Ah Oo Caan Ah
Meelaha aan qubayska lahayn ee musqusha, dad badani waxay doorteen inay ku beddelaan shaashadda alaab ka qurxoon tan aagga qubayska, iyadoo 77% ka mid ah jawaab-bixiyeyaashu ay doorteen alaabooyinkan, oo aad uga sarreeya 26% kii doortay taayirada. Si kastaba ha noqotee, meelaha aan qubayska lahayn ee dabaqa, tirada ugu badan ee dadka (59%) ayaa wali doorta inay isticmaalaan alaabada lebenka ah.
Ka badinta Qaabka Casriga ah
Sannadkan, boqolkiiba 20 jawaabeyaashu waxay yiraahdeen waxay dooran doonaan qaab casri ah oo loogu talagalay musqusha, tiro la mid ah tan 2019 iyo 5 boqolkiiba dhibcaha ka sarreeya 2018, taas oo muujineysa in qaabka casriga ah uu wali yahay qaabka ugu badan ee naqshada musqusha Mareykanka. Tani waxay la barbardhigaysaa boqolkiiba 18 ee milkiilayaasha guryaha doorta Kumeelgaarka, hoos udhaca 3 boqolkiiba dhibcaha laga bilaabo 2019, halka tirada dadka dooranaya Casriga, Dhaqanka iyo Reer-guuraaga dhammaantood ay ka deggan yihiin oo ka badan sanadkii hore.
HWaa Caddaan Hadhay.
Dhanka midabka, cadaanku waa midabka ugu badan, iyadoo dad badan ay doorteen cadaan ahaan midabka ugu weyn ee armaajooyinka musqusha, miisaska, darbiyada qubeyska iyo darbiyada guud. Miisaska dushiisa, in ka badan 51% jawaabeyaasha ayaa doortay midab cad, ka hor midabka (15%), cawl (14%) iyo beige (9%), iyadoo tirada jawaabeyaasha ee doortay midabka ay hoos ugu dhacday 4 boqolkiiba dhibco.
▌8 Jawaab bixiyaasha 10kiiba XNUMX waxay doorteen inay badalaan Nalalka Musqusha Musqusha.
Sannadkan, 8 ka mid ah 10 jawaab bixiyeyaashu waxay doorteen inay cusbooneysiiyaan nalalka musqusha. Kuwaas waxaa ka mid ah, xulashada ugu weyn ee laambadaha darbiga ku dheggan (58%) iyo nalalka dib u dhaca (55%), waxaa ku xiga nalalka qubeyska (32%), nalalka marawaxadaha (25%), nalalka muraayadda (17%), kuwaas oo xulashadooda nalalka muraayadaha ayaa kordhay boqolkiiba 4 dhibcaha sanadkii hore, oo mudan in fiiro gaar ah loo yeesho armaajooyinka musqusha iyo soosaarayaasha muraayadda qubeyska.
- Qodobbo Kale -
1, Celceliska qiimaha dayactirka musqusha ee milkiileyaasha Mareykanka waa $ 8,000, oo ku saabsan RMB 53,000.
2, Kahor intaadan cusbooneysiinin musqusha, 69% jawaabeyaasha ayaa sheegay inay horeyba ugu qanacsaneyn musqusha hore, ilaa 59% sanadka 2019.
3, Cabashooyinka ugu waaweyn ee milkiileyaasha guryaha ee Mareykanka ee ku saabsan musqulaha waxay ku saabsan yihiin meel lagu kaydiyo oo aan ku filneyn (34%), meel aad u yar oo lagu qubeysto (34%), laydh aan ku filnayn (29%) iyo meel yar oo miisaska lagu iibiyo (25%).
4, 59% jawaabeyaashu waxay yiraahdeen waxay ku nasanayaan musqusha, kororka 4 boqolkiiba dhibcaha sanadkii hore.
5, Qiyaastii seddex meelood saddex meelood jawaabeyaasha waxay leeyihiin laba ama in ka badan oo muraayado ah musqusha sayidkooda.
6, Afaraad shan meelood jawaabeyaashu waxay shaqaalaysiin doonaan xirfadle ka caawiya dib u cusbooneysiinta musqusha, iyadoo dayactirayaashu ay leeyihiin heerka kaqeybgalka ugu badan ee ah 43 boqolkiiba, oo ay ku xigto qalabka musqusha (20 boqolkiiba) iyo nashqadeeyayaasha musqusha (12 boqolkiiba).
Hore:: Waxaa soo xulay NASA, Seddexdan Musqusha waxay tagayaan Dayaxa! Next: Waxa La Sameeyo Markaad Iibsaneyso Qasabada Jikada
Sidee loo beddelaa tuubbooyinka jikada?
Waa maxay sababta qasabadda saxan ee jikada u sameysaa farqi
5 Waxyaabood oo Sameeya Qasabad Weyn oo Jikada wax loogu kariyo
Waxa La Sameeyo Markaad Iibsaneyso Qasabada Jikada
Waxaa soo xulay NASA, Seddexdan Musqusha waxay tagayaan Dayaxa!
Ma Ogtahay Sida Loo Qurxiyo Musqusha Suqan Ee Ugu Caansan Sanadka 2020?